कार्टुन चलचित्र कसरी बनाइन्छ ? ~ विज्ञान संसार
कार्टुन चलचित्र कसरी बनाइन्छ ?
Posted by Om Bhandari On 10:25 PM
कार्टुन चलचित्र बालबालिकामा एकदमै लोकप्रिय छ | मिकी माउस, डोनाल्ड डक, टिनटिन, पपया आदि कार्टुन चरित्रहरु विश्वमै प्रख्यात रहेका छन | यस्ता कार्टुन चलचित्रहरु कसरी बन्छन त ? यस्तो जिज्ञासा सबैमा जाग्न सक्छ |
सामान्य चलचित्र कलाकारहरूको हाउभाउलाई क्यामेराको मद्दतले छायाङ्कन गरेर निर्माण गरिन्छ । तर कार्टुन चलचित्रहरूमा भने कलाकारको सट्टा चित्रहरूको प्रयोग गरिन्छ । सुन्दा अचम्म लाग्नसक्छ एक सेकेन्डको कार्टुन चलचित्रमा विभिन्न २४ वटा चित्रहरू प्रयोग भएका हुन्छन । ती विभिन्न चित्रहरुलाई एक एक गरी एउटा विशेष प्रकारको क्यामेराले खिचिन्छ । त्यसरी खिचिएका सबै चित्रहरूलाई जोडेर एकै पटकमा देखाउँदा चित्रहरू चलेको भ्रम पैदा हुन्छ ।
यस्ता चलचित्र बनाउँदा चित्रहरूलाई एउटा विशेष प्रकारको टेबल वा स्ट्यान्डमा राखिन्छ । यसलाई एनिमेशन स्ट्याण्ड (Animation Stand) भनिन्छ । त्यो स्ट्याण्डको ठीकमाथि क्यामेरा राखेर त्यसको फोटो खिच्ने काम गरिन्छ । एउटा चित्रका विभिन्न भागहरू भिन्न भिन्न पारदर्शी कागजमा बनाइन्छ । त्यसै कारण कलाकारले त्यो पात्रको हरेक पटक पुरै चित्र बनाउनु आवश्यक पर्दैन । खालि फरक फरक चालहरूको मात्र चित्र बनाइन्छ ।
त्यसरी चित्र तयार भएपनि फोटो खिच्ने बेलामा त्यस पात्रका फरक फरक भागहरूलाई मुख्य चित्र माथि राखिन्छ । यसरी चित्र मिलाएर राख्दा एउटा पूर्ण चित्र बन्छ । पछि पालैपालो ती चित्रहरूलाई क्यामेराले खिचिन्छ र त्यसलाई मिलाएर एउटा सिँगो चलचित्र बनाईन्छ ।
अहिले कम्य्युटरमा भएको विकासले कार्टुन चलचित्र बनाउन झनै सजिलो भएको छ । यस प्रविधिमा चित्रहरूलाई क्यामेराले खिचेर मिलाउनु पर्दैन । त्यसको सट्टा चित्रलाई निर्माण गरिने गरिन्छ । अझ 3D Animation का कतिपय सफ्टवेरहरूको प्रयोग गरेर सोझै कम्य्युटरमा नै कार्टुन पात्रको चित्र तयार गर्न सकिन्छ । अनि त्यसरी तयार पारेको पात्रलाई कम्य्युटर सफ्टवेयरको मद्दतले चलायमान गराएर चलचित्र बनाइन्छ । यसमा पनि प्रतिसेकेण्ड २४ देखि ३० वटासम्म चित्रहरू प्रयोग गरिन्छ । यसरी कम्प्युटरबाट निर्माण गरिने कार्टुन चलचित्रहरू त साँच्चिकै जस्ता देखिन्छन ।
कार्टुन चलचित्रले मनोरञ्जन मात्र हैन, शिक्षा पनि दिन सक्छ । बच्चाहरूले धेरै नै मन पराउने भएकोले विश्वमा कार्टुन चलचित्रको प्रयोग मनोरञ्जनका लागि मात्र नभएर कुनै सन्देश प्रशारण गर्नको लागि पनि हुने गर्छ ।
( Free Download Animation tool , 3D Animation Software Download , Make carton )
Categories: कार्टुन, चलचित्र
हाइड्रोजन बम के हो ?